Indraim-bava: Izay afeniny no maha izy azy ny olona… | NewsMada
Indraim-bava: Izay afeniny no maha izy azy ny olona…
Fotoam-pifidianana izao. Mandeha ny fampahafantaran’ny kandidà ny tenany fa anisan’ny mirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika izy. Miara-dalana amin’izany ny fanazavany ny foto-keviny, ny vinam-piarahamonina, ny fandaharanasany… Amin’izany, mirangaranga avokoa izao karazana fampanantenana izao, ary mirangorango tokoa ny maro. Toy ny hoe hisy fahagagana iny.
Tsy vitan’izany, toa hafa sy tsara avokoa izay lazaina, izay aseho, izay atao… Ady fiady io: politika. Atao izay azo atao hahazoana ny vaton’ny mpifidy atsy ho atsy, hahazoana ny fahefam-panjakana hanatanterahana izay hoe vinam-piarahamonina izay. Eny, na ny tsy azo atao aza amin’izany, mety ho vita sy inian’ny sasany atao fotsiny izao? Maika ny ho voafidy tsinona.
Anisan’izay tsy tokony hatao izay, ohatra, ny fanaratsiana na faminganana ny mpifaninana amin’ny tena. Saika miara-dalana amin’izany koa ny filazana zava-tsy marina, ny fitsikerana befahatany, ny fanasoketana… Sanatria, tsy fampielezan-kevitra ve raha tsy misy an’izany? Na tsy mafanafana raha tsy misy karazana ampamoaka… Efa fampielezan-dainga sy tsaho indray amin’izay.
Manginy fotsiny, mandeha koa ny fampielezana vola, fanomezana, fampisehoana…? Ny zava-doza, misy ezahina afenina fatratra amin’izany. Asa na tantara ratsy io, ohatra, na ny fanao sy toetra ratsy an-katakonana, na ny efa fomba fiasa ratsy hatramin’izay… Ho azo amin’izany ve ny vahoaka? Be izay hita izay fa tsy nitondra inona, matoa mbola toy izao ny fiainam-bahoaka… tsy takona afenina.
Amin’ny fampielezan-kevitra sy fanaovana fampanantenana toy izao: tsy izay aseho no tena maha izy azy ny olona, fa izay afenina. Na fiavian’ny vola ihetsehana aza, ohatra, na izay ao ambadika, ny tombony sy ny tombany; eny, ny tambiny aza. Ndrao mandady amin’ny hazo tsy fantatra, na amin’ny azo efa fantatra izao ny (h)ataony… Tsy izay aseho tsinona no maha izy azy ny olona, fa izay afenina.
“Tsy mamafa ireo olana ireo ny fifidianana”, hoy ny Praminisitra frantsay iray izay, Jean-Pierre Raffarin. Tsy mamafa ny maha izy azy ny tsirairay koa ny filazan-tena amin’ny fifidianana?